Mana Oromoo Swiss: We must not turn a blind eye to AFD
''Kan dabi jedheen mana Abbaa diiga.''jedha Oromoo yoo dubbatu.
Gartuuwwan Adda bilisummaa diiguudhaaf akkasumas maqaa ABO tiin diina jala galuun diina jaaruuf yaalan dhumni isaanii akkuma beekamu carraa gantootaatu isaan eeggata.
Mee yeroon karratti akka deebi'an Oromoonni Oromummaan isinitti dhag'amu martii carraaqaa.
ABO jechuun kaayyoo isaa malee namoota maqaa isaatiin diina jala galan ta'ee dhibamuu hin danda'u!!!
Oromian dhiiga ilmaan isaatiin ni bilisooma!!!
CDUn gartuu gabrooffattuu kaleessa hawwaniiti!!!
Kaayyoo dhabinsaa fi bishaan gabatee irraa ta'uun asiif achi garuma raasanitti raasamuun boodi isaa dhangala'uu fidha.
Ilmaan ormootaa har'a haalli addunyaa geddaramee jiraa waliin geddaramuu qabna; ebelu akkas ta'ee jiraa akkas ta'uu qabna; Har'a Mallas nu waamee jiraa jala fiiguu qabna; jechuun kaayyoo qabataamaa fi Dhaabbina ykn stand ofii dhabuun bu'aan isaa saba ofii biratti jibbamuu fi diina ofii biratti illee tuffatamuu fida.
Mee yaa ilmaan aayyaa of haa sirreessinu. Wal diignee diina anaannachiisuu irra wal dhagahuun wal haa jabeeffannu.
Mee tokko jennee Kaayyoo haqaatiif lafaa haa eegallu.
Mana Oromoo Swiss galatoomi. jabaadhu. E-maila kootiin dhuunfaatti yoo dandeesse na qunnami. Yaada adda addaa mana kee kana irratti akka qooda fudhatan irratti hojjedhu.